Mareykanka oo Ansixisay Adeegsiga Tallaalka Lagaga Hortagayo Cudurka Covid-19 | Gabiley News Online
Mareykanka oo Ansixisay Adeegsiga Tallaalka Lagaga Hortagayo Cudurka Covid-19
Sawir laga soo qaaday tallaalka ay sameeyeen Pfizer/BioNTech ee COVID-19
Saraakiisha Caafimaadka dowladda Mareykanka ayaa ansixiyay adeegsiga tallaalka lagaga hortagayo cudurka COVID-19, tallaabadan oo waddada u xaadheysa in tallaalka qaadashadiisa ay shacabka Mareykanka bilaabaan todobaadkan.
Hay’adda Cuntada iyo Dawooyinka Mareykanka ee loo soo gaabiyo FDA ayaa xalay ku dhawaaqday, in tallaalka ay si xaalad deg deg ah u ogolaatay in loo isticmaalo, waxaana hadda bilaabmaya daabulista dawada tallaalkan oo ay sameyntiisa iska kaashadeen shirkadaha dawada farsameeya ee kala ah Pfizer oo Mareykan ah iyo shirkadda BioTech oo laga leeyahayJarmalka.
Tallaalka ayaa kusoo beegmaya xilli ay aad u sii kordhayaan kiisaska dadka Mareykanka ugu dhimanaya cudurka Covid-19. Cel celis ahaan hadda waxaa maalintiiba Mareykanka ugu dhinta xanuunkan 3,000 oo ruux.
Dhanka kale, warbaahinta Mareykanka ayaa ku warramay in madaxa shaqaalaha Aqalka Cad, Mark Meadows uu Jimcihi shalay ku cadaadiyay madaxa hayadda FDA Stephen Hahn inuu si deg deg ah u ansixiyo adeegsiga tallaalka Pfizer, haddii kalana uu shaqadiisa weyn doono.